Yega Island Nation isina Coronavirus icharamba yakavharwa
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Cook Islands Kuputsa Nhau » Yega Island Nation isina Coronavirus icharamba yakavharwa
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Cook Islands Kuputsa Nhau • Hurumende Nhau • Health News • New Zealand Kupwanya Nhau • nhau • vanhu • chengetedzo • ushanyi • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
Nguva pfupi uchangomhara muRarotonga unogona kunge uchiita kayaking pagirazi rekristaro rakajeka, uchimhanyisa pahotera yako yekutanga kana yekuzorora padziva panzvimbo yako yakanaka yekutandarira. Hazvina mhosva kuti uripi kana chii chaunoda kuita, zviwi ndezvenyu kunakidzwa pazororo rako.
Ehezve izvi kana iwe uchikwanisa kusvika ipapo
The Zvitsuwa Kuku haizovhurezve kufamba, chii chinosanganisira musika wayo mukuru wekushanyirwa New Zealand kudzamara pasati pave nekutapurirana munharaunda kweCovid-19 kwemazuva gumi nemana uye vafambi vanopfuura gumi nemaviri vakabaiwa jekiseni
Cook Islands miganhu yakavharwa kuNew Zealand uye dzimwe nyika zhinji kweanopfuura vhiki nhatu kubva pakatanga kutaurwa nyaya yeDelta muna Nyamavhuvhu 16 muAuckland.
Iwo Cook Islands irudzi muSouth Pacific, ine hukama hwezvematongerwo enyika kuNew Zealand. Zvitsuwa zvaro gumi nemashanu zvakapararira munzvimbo yakakura. Chitsuwa chikuru, Rarotonga, inogara kumakomo asina kuenzana uye Avarua, guta guru renyika. Kuenda kuchamhembe, Aitutaki Island ine dziva rakakomberedzwa nemakorari uye zvidiki, jecha zviwi. Nyika inozivikanwa nenzvimbo dzayo dzakawanda dzekudyara snorkeling uye scuba-diving.
Hurumende yeCook Islands yakavhara kufamba nekukasira, ichingobvumira Kiwis muCook Islands kudzoka.
Cook Islands Prime Minister Brown akati pane imwe nguva mune ramangwana, nyika dzese dzinofanirwa kugara neCovid-19. Nekudaro, iyo nguva yanga isiri ikozvino yeCook Islanders, sezvo ivo vachinyatso tarisa New Zealand's Delta kuputika uye chirongwa chekudzivirira.
Iwo Cook Islands ndiyo imwe yenyika shoma kwazvo pasirese yakwanisa kuchengetedza Covid-19 kunze.
In Nyamavhuvhu Cook Islands akaita vimbiso yekugara Coronafree.
Brown akati kunhepfenyuro yeNew Zealand: "Kunyange isu tichiziva kuti pane imwe nguva mune ramangwana nyika dzese dzichada kudzidza kurarama neCovid-19, nguva iyoyo haisati yasvika."
Akaburitsa pachena Cook Islands vaisada kubuda kwe COVID. Akawedzera, kukanganisa kwehutano hwehumambo pamwe nehupfumi kwaizokanganisa.
VaBrown vakati hurumende yavo iri kuedza nepose painogona napo kuchengetedza hutano nekugara zvakanaka kwevaCook Island pamwe nehupfumi hwenyika.
Vanopfuura mazana matatu veCook Island vakasarudzika muNew Zealand vaizofanira kumirira kusvika kanenge Chipiri chinotevera kuti vazive kana vachikwanisa kudzokera kumba.
Brown akati hurumende yake iri kutarisa ndege dzekudzosera kuChristchurch kune avo vari kunze kweAuckland munzvimbo dzechipiri, asi hapana mazuva akatarwa.
Vaya vafambi vaizoda kupa yakaipa Covid-19 bvunzo maawa makumi manomwe nemaviri vasati vaenda, zadza Cook Islands fomu rekudzosera fomu uye vozovharirwa kwemazuva manomwe ekumanikidzwa pavanosvika kuguta guru renyika Rarotonga.
Brown akati nekuda kwenjodzi yeCovid-19, Cook Islanders muAuckland vaifanira kumirira donhwe kusvika padanho repiri kana pazasi vasati vatenderwa kubata ndege yekuenda kumba.
Khabinethe yake ichaenderera ichiongorora ruzivo rutsva nemazano kubva kuvakuru vehutano kana nhamba dzekubaiwa dzichiwedzera muNew Zealand.
Mhedzisiro yedenda pane Cook Islands kushanya uye hupfumi hwayo hwaive hwakakosha, uye kuputika muNew Zealand kwave kukanganisa kukura.
Mari yemamiriyoni gumi nemashanu emadhora yakarongedzwa yekuwedzera rutsigiro kumabhizinesi eCook Islands kubva kubhajeti raJune.
Mari dzekubhadhara dzichaenderera mberi munaGunyana uye mari dzebhizimusi, kusanganisira dzega dzevatengesi, dzaizodzoreredzwa muna Gumiguru.
“Tinoziva kuti musika wedu wekushanya wakasimba uye ndozvakaitawo hupfumi hwedu. Isu takaona kukurumidza kwekushanya kwakakwirazve muna Chivabvu, uye zvichaitika zvakare ”, akadaro Brown kune imwe nhepfenyuro yenhau yeNew Zealand.